Jabuuti oo DF Somalia bartay cashar diblomaasi ah oo culus (Afar arrimood oo keenay in Somalia laga badiyo) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Jabuuti oo DF Somalia bartay cashar diblomaasi ah oo culus (Afar arrimood...
(Hadalsame) 28 Jan 2021 – DF Somalia ayaa si adag uga hor jeesatey warbixin qiimayn ah oo ay soo saareen guddi lagu sheegay xaqiiqo raadin ku saabsan in ay Kenya faragelinayso arrimaha gudaha Somalia, taasoo ah arrin soo taagnayd muddo dheer.
Guddiga ayaa warbixintooda ku sheegay in aanay soo arag ”wax muujinaya” in ciidanka malliishiyaadka ah ee Cabdirashiid Janan ay iska soo abaabulaan gudaha Kenya, iyagoo sheegay inay joogaan dhanka Somalia, taasoo aan run ahayn, sida ay xitaa xaqiijinayaan dadka reer Mandheera.
1 – Marka 1-aadba meesha ay beeshay waxay tahay inay wefdiga hoggaaminayaan rag diblomaasiyiin ah oo hal dal ka socda kuwaasoo uu ugu horreeyo Danjiraha Jabuuti ee Kenya, Yaasiin Cilmi Buux, iyo nin lagu sheegay ”indha indheeye” IGAD ah, halkii uu wefdigu ka ahaan lahaa mid si buuxda u hoos taga IGAD.
Marka ay halkaa taagan tahay go’aanku wuxuu noqday mid u yaalla hal dal, ama xitaa tan ugu daran, ashkhaas gaar ah oo dantoodii ka eegtay amaba aan arrinta si buuxda ugu kuur gelin, tusaale, waxay tageen Mandheer, Nairobi iyo Muqdisho, balse ma tegin Beled Xaawo.
2 – Dowladda Kenya waxay adeegsatey xeelado badan sida ay keentay muuqaallo ay ku sheegtay in lagu qaaday ”dayax-gacmeed” oo DF ku eedaynaya inay iyadu daandaansiga waddo, iyadoo dabcan markii uu wefdigu Mandheera joogey ishooda ka dhowrtay wax muujin kara in ay malliishiyaad meesha joogaan.
3 – DF Somalia iyadu wax dedaal ah ma muujinin marka laga soo tago go’aankii soo boodada ahaa ee ay xiriirka ugu jartay Kenya ee ay misna soo celisey iyadoo aanay weli jirin wax rasmi ah oo ama go’an ama furan.
Waxay kaliya isku hallaysay in ay Jabuuti iyada u hiillin doonto si la mid ah sida uu u fikiro qofka caadiga ah ee aan fahamsanayn sida loo maareeyo umuuraha caalamka oo had iyo goor aabbe iyo hooyo yiraahda wax dan la yiraahdo, taasoo keentay inay bacaadka qabsato. Si kastaba, Jabuuti waa dal 3-aad ee ma aha gobol ka tirsan Somalia.
4 – Khaladka kale wuxuu yahay in sida muuqata aysan IGAD u shaqaynin sidii urur ee ay taa biddaalkeeda arrin sidan oo kale xasaasi u ah u farageliyeen hal dal oo aan isna mas’uuliyaddii u gudanin sidii ay mudnayd, marka ay halkaa joogto waxaa eedda yeelanaya IGAD oo la filayey in isbedel ku dhici doono, balse weli u eg mid ku jirta labadii gacmood (duopoly) ee Itoobiya iyo Kenya oo sanado badan iyagu ku shaqaysanayey.
Isku soo duube waxaa dhacay khaladaad farsamo oo waawayn oo kuwa ugu sii daran ay galeen DF Somalia iyo IGAD. Kenya iyo Jabuuti iyagu danahooda ayay ka eegteen, xitaa haddii ay anshax ahaan khalad tahayna ujeeddo ahaan waa macquul.
DF Somalia iyadu cashar diblomaasiyadeed oo culus baa halkaa ugu jira, mana aha inay Jabuuti maagto ee waa inay micne u yeeshaa maaraynta howlaha iyada hor yaalla.
Previous articleDF Somalia oo ka hadashay waxa ka jira inay fasaxday Jaadka Kenya
Next articleQoowmiyadaha Kikuuyada & Kalenjiinka oo isku koobay boosaskii dowladda Kenya (Soomaalida oo ka mid ah qoowmiyadaha dhacan)